2 Samueri 14 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
2 Samueri 14:1-33
14 Zvino Joabhi+ mwanakomana waZeruya+ akaziva kuti mwoyo wamambo waida Absaromu.+ 2 Naizvozvo Joabhi akatumira shoko kuTekoa,+ akanotora mumwe mukadzi akachenjera+ ikoko, akati kwaari: “Ndapota, chema, uye ndapota, pfeka nguo dzokuchema, usazora mafuta;+ uite somukadzi ave achichema munhu akafa kwemazuva mazhinji.+ 3 Upinde muna mambo, utaure naye shoko rakadai.” Naizvozvo Joabhi akaisa mashoko acho mumuromo make.+ 4 Zvino mukadzi wacho muTekoa akapinda maiva namambo, akawira pasi nechiso chake,+ akagwadama, akati: “Haiwa mambo, ponesai!”+ 5 Mambo akati kwaari: “Chii chiri kukunetsa?” Iye akati: “Chokwadi ndiri chirikadzi,+ murume wangu akafa. 6 Mushandikadzi wenyu aiva nevanakomana vaviri, vaviri vacho vakarwisana vari kusango+ pasina mununuri+ wokuti avarandutsire. Mumwe akazorova mumwe akamuuraya. 7 Zvino tarirai mhuri yose yamukira mushandikadzi wenyu uye iri kuramba ichiti, ‘Tipe iye akauraya munun’una wake, kuti timuuraye nokuda kwomweya womunun’una wake+ waakauraya,+ ngatitsakatisei mugari wenhaka!’ Zvino vachadzima kubvira kwemazimbe angu asara, kuti vasapa murume wangu zita kana kuti mupukunyuki panyika.”+ 8 Mambo akabva ati kumukadzi wacho: “Enda kumba kwako, ini ndicharayira shoko pamusoro pako.”+ 9 Mukadzi wacho muTekoa akati kuna mambo: “Haiwa ishe wangu mambo, kukanganisa ngakuve pandiri, nepaimba yababa vanguwo,+ asi mambo nechigaro chake choumambo varege kuva nemhosva.” 10 Mambo akati: “Kana pakava nomunhu anotaura newe, uuyewo naye kwandiri, haazombokukuvadzizve.” 11 Asi iye akati: “Ndapota, mambo ngaayeuke Jehovha Mwari wenyu,+ kuti mutsivi weropa+ arege kuramba achiparadza uye kuti varege kutsakatisa mwanakomana wangu.” Iye akati: “NaJehovha mupenyu,+ hapana kana bvudzi rimwe chete+ romwanakomana wako richawira pasi.” 12 Zvino mukadzi wacho akati: “Ndapota, regai mushandikadzi+ wenyu ataure shoko+ rimwe chete kuna ishe wangu mambo.” Naizvozvo iye akati: “Taura hako!”+ 13 Zvino mukadzi wacho akati: “Saka, mafungirei zvakadai+ pamusoro pevanhu vaMwari?+ Mambo zvaari kutaura shoko iri ari kuita somunhu ane mhosva,+ pakuti mambo haasi kudzosa uya wake waakadzinga.+ 14 Nokuti chokwadi tichafa+ tikaita semvura iri kudururirwa pasi, isingagoni kuworerwa. Mwari haazotoreri munhu mweya,+ asi anofunga zvikonzero zvokuti uya akadzingwa arege kuva akadzingwa kwaari. 15 Zvino zvandapinda kuzotaura shoko iri kunashe wangu mambo, imhosva yokuti vanhu vakandityisa. Naizvozvo mushandikadzi wenyu ati, ‘Ndapota, regai nditaure namambo. Zvichida mambo achaita zvinotaurwa nomurandasikana wake. 16 Nokuti mambo ateerera kuti anunure murandasikana wake muchanza chomurume anga achitsvaka kutsakatisa ini nomwanakomana wangu mumwe oga panhaka inopiwa naMwari,’+ 17 mushandikadzi wenyu akabva ati, ‘Ndapota, shoko rashe wangu mambo ngarizorodze.’ Nokuti ishe wangu mambo akaita sezvakaita ngirozi+ yaMwari wechokwadi, kuti asiyanise zvakanaka nezvakaipa,+ uye Jehovha Mwari wenyu ngaave nemi.” 18 Zvino mambo akapindura akati kumukadzi wacho: “Ndapota, usandivanzira chinhu chimwe chete pane zvandiri kukubvunza.”+ Mukadzi wacho akati: “Ndapota, ishe wangu mambo ngaataure.” 19 Mambo akati: “Uri kubatsirwa naJoabhi+ pazvinhu zvose izvi here?+” Mukadzi wacho akabva apindura akati: “Nomweya wenyu mupenyu,+ haiwa ishe wangu mambo, hapana munhu anogona kuenda kurudyi kana kuti kuruboshwe kubva pane zvose zvataurwa naishe wangu mambo; nokuti mushandi wenyu Joabhi ndiye akandirayira, uye ndiye akaisa mashoko aya ose mumuromo womushandikadzi wenyu.+ 20 Mushandi wenyu Joabhi aita chinhu ichi kuti achinje maonerwo enyaya yacho, asi ishe wangu akachenjera sokuchenjera kwakaita ngirozi+ yaMwari wechokwadi zvokuti anoziva zvose zviri munyika.” 21 Naizvozvo mambo akati kuna Joabhi: “Tarira zvino, chokwadi ndichaita chinhu ichi.+ Naizvozvo enda, dzosa jaya riya Absaromu.”+ 22 Joabhi akawira pasi nechiso chake, akagwadama, akakomborera mambo;+ Joabhi akati: “Nhasi mushandi wenyu aziva kuti ndanzwirwa nyasha nemi,+ haiwa ishe wangu mambo, nokuti mambo aita zvataurwa nomushandi wake.” 23 Naizvozvo Joabhi akasimuka, akaenda kuGeshuri,+ akauya naAbsaromu kuJerusarema.+ 24 Zvisinei, mambo akati: “Ngaatsaukire kumba kwake, asi haangaoni chiso changu.”+ Naizvozvo Absaromu akatsaukira kumba kwake, uye haana kuona chiso chamambo. 25 Zvino pakati paIsraeri wose pakanga pasina murume akanga akanaka kwazvo+ uye airumbidzwa kwazvo saAbsaromu. Kubvira pasi petsoka dzake kusvikira panhongonya yomusoro wake pakanga pasina pakaremara. 26 Paaigera musoro wake—aiugera pakupera kwegore rimwe nerimwe; nokuti bvudzi rake raimuremera kwazvo,+ aiugera, oyera bvudzi romusoro wake richisvika mashekeri mazana maviri, achishandisa chiyereso chedombo chamambo. 27 Absaromu akaberekerwa vanakomana vatatu+ nomwanasikana mumwe chete ainzi Tamari. Aiva mukadzi ane chitarisiko chakanaka kwazvo.+ 28 Absaromu akaramba achigara muJerusarema kwemakore maviri akazara, asi haana kuona chiso chamambo.+ 29 Naizvozvo Absaromu akashevedza Joabhi kuti amutume kuna mambo, asi haana kubvuma kuuya kwaari. Akabva amushevedzazve kechipiri, asi haana kubvuma kuuya. 30 Akazoti kuvashandi vake: “Tarirai chikamu chomunda waJoabhi chiri padivi pechangu, ane bhari imomo. Endai munochipisa nomoto.”+ Naizvozvo vashandi vaAbsaromu vakapisa chikamu chacho chomunda nomoto.+ 31 Joabhi akasimuka, akasvika kuna Absaromu pamba pacho, akati kwaari: “Vashandi vako vapisirei chikamu chomunda wangu nomoto?” 32 Naizvozvo Absaromu akati kuna Joabhi: “Tarira! Ndakakushevedza, ndichiti, ‘Uya kuno ndikutume kuna mambo, unoti: “Ndakabvirei kuGeshuri?+ Zvingava nani kudai ndanga ndichiri ikoko. Zvino regai ndione chiso chamambo uye, kana paine chandakakanganisa,+ ngaabve andiuraya.”’” 33 Naizvozvo Joabhi akapinda maiva namambo akamuudza. Akabva ashevedza Absaromu, iye akapinda maiva namambo, akagwadama, akawira pasi nechiso chake pamberi pamambo; mambo achibva atsvoda Absaromu.+